Madaxweynaha Soomaaliya oo Canbaareeyay weerarkii Garowe – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaaliya oo Canbaareeyay weerarkii Garowe
Abriil 20, 2015 9:24 b 0
Isniin, Abriil 20, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka maanta lagu qaaday shaqaalaha Qarammada Midooday ee magaalada Garowe.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in weerarka lagu qaaday Qarammada Midoobay uu yahay mid lagu qaaday dadka iyo dalka Soomaaliya, gaar ahaanna ubadka Soomaaliyeed maaddaama shaqaalaha la weeraray uu xilkoodu ahaa waxbarashada carruurta Soomaaliyeed.
Madaxweynuhu wuxuu tacsi u diray eheleada iyo qaraabada dadka Soomaaliyeed ee weerarka maanta lagu dilay. Madaxweynuhu wuxuu si gaar ah tacsi ugu diray Xoghayaha Guud ee Qarammada Midoobay Ban Ki-moon iyo Madaxda dalalka ay u dhasheen Shaqaalaha Caalamiga ah ee QM ee weerarka lagu dilay. Wuxuuna u sheegay in aan ummadda Soomaaliyeed illoobi doonin waxqabadka iyo taageerada Qaramada Midoobay iyo shakhsiyaadka naftooda u huray.
Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday baaritaan deg deg ah in ay ciidammada
Amnigu ku sameyn doonaan qaraxa, isla markaana QM lala wadaagi doono xogta, ayadoo isla markaasna gacna furan lagu soo dhoweynayo haddii ay QM dooneyso in ay ka qeyb qaadato baaritaanka.
Wuxuu ku boorriyay Dowlad Goboleedka Puntland iyo gaar ahaan ciidanka Amniga Puntland in ay sii xoojiyaan feejignaantooda isla markaana aanay u
dabcin argaggixisada oo hadda ku soo haray degaanno kooban, laguna daba jiro.
Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo Cadaado Gaaray
FAAHFAAHIN: Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Nugaal oo ka warbixiyay Qaraxii Garowe [DHAGAYSO]